June 2018 – Tips for refugees
Aniga (oo ah 15 sano jir) waxaan u diray saaxiibkey sawir aan xiranahay hoosgashi.Wuxuu tusiyay sawirka saaxiib.Saaxiibkaas wuxuu u diray sawirka dad badan oo ardayda fasalkayga ah.Maxaa ila gudboon in aan hadda sameeyo?
Waxaa laga yaabaa in aad ka baqayso waxa dadka kale ay kuu qaadan karaan.
Waxaa laga yaabaa in aad ka niyad-jabtay ama in aad u xanaaqday saaxiibkaaga.
Looma baahan in aad kaligaa wax ka qabato walwalkaaga!
Waa kuma qofka weyn ee aad ku kalsoon tahay?
Kala hadal qofkaasi.
Waxaa laga yaabaa in uu ku caawin karo.
Muhiim ah in la ogaado:
Qofna looma oggola in uu diro sawirkaaga adiga oo aan oggolaan.
Waxaad ka raadin kartaa sawirkaaga internet-ka.
Geli magacaaga Google.
Haddii aad ku aragto sawirka bog internet:
La xiriir bogga internet-ka.
U sheeg:Sawirkaasi waa in la tirtiro.Aniga ayaa iska leh.
U sheeg ardayda aad isku fasalka tihiin:
Sawirkaasi looma baahnayn in la diro.
Caawinaad ka raadso qof aad ku kalsoon tahay.
Haddii aad doonayso in aad kala hadasho qof kale ama aad su’aalo qabto:
Waxaad talo ka heli kartaa www.save-me-online.de.
Talada waa lacag la’aan loomana baahna in aad magacaaga sheegto.